Ny asa - Tianjin Goldensun Steel Co., Ltd.
Tsy mety mandray mpividy mba hifandray antsika.
LIGHT vy keel
JEREO REHETRA NY SOKAJY
Vokatra tsara tsirairay dia natao, dia ho afa-po ianao. Ny vokatra eo amin'ny famokarana dingana efa natao hentitra maso, satria fotsiny mba hanome anao ny tsara indrindra tsara isika dia hahatsapa fahatokiana. High famokarana vola vidiny mirary, fa noho ny fiaraha-miasa maharitra.
Large mpanjifa base eto amin'izao tontolo izao
15 taona mpanamboatra zava-nitranga nanomboka tamin'ny 2005, 12 taona matihanina fanondranana traikefa nanomboka tamin'ny 2007. 48 ireo nanatrika ny fampirantiana ao an-toerana sy any ivelany maro ny hatsaram-panahy niara-niasa tamin'ny mpanjifa. Ary fanondranana ny firenena 60 mahery, Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, ny faritra Afrika, Amerika Afovoany sy Atsimo faritra etc.
Tsy mitandrina ny tahiry sy ny vokatra vaovao ny taona rehetra, ka raha manao didy isika dia manome toky ny fanaterana ny fotoana. Mandritra izany fotoana izany, dia hitandrina ny faran'izay tsara na amin'ny famokarana na boloky hazo.
Manantena izahay fa hiara-miasa amin'ny mpanjifa bebe kokoa ho an'ny fifanampiana fampandrosoana sy ny tombontsoa.